Amazwi kaJulayi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
UJulayi yinyanga esivame ukuzihlanganisa nenyanga engaphambi kweholide lehlobo. Futhi ngukuthi eNyakatho Nenkabazwe ukushisa kuqala ukuba bukhulu, kangangoba abantu abaningi basebenzisa isikhathi sabo sokuphumula noma ngezimpelasonto ukuya olwandle noma ukuqwala izintaba. Sikweleta konke sobabili ebangeni ukuthi umhlaba uqhamuka enkosini yenkanyezi, naselangeni uqobo, elihlala esibhakabhakeni cishe amahora ayi-15 futhi lichaza i-arc elinganiselwa ku-73º. Imisebe yelanga esiyitholayo ngakho-ke iphezulu.
I-Los amazwi kaJuly Banikezelwe ezicini zale nyanga noma, okuza entweni efanayo, kwisomiso, ukushisa kanye "nengoma" ethile yezinambuzane ezithile.
1 Unjani uJulayi eSpain?
2 Athini amazwi kaJulayi?
Unjani uJulayi eSpain?
ESpain minyaka yonke sivame ukuba nenyanga kaJulayi kufudumele ngokweqile, ngezinga lokushisa elijwayelekile elingaba ngu-26ºC. Kunezindawo eziningi lapho amanani aphezulu wonyaka aqoshwa khona, adlula u-30ºC engxenyeni enkulu yezwe, futhi afinyelela ku-40ºC noma aze adlulele eningizimu ye-Andalusia naseMurcia. Okudidayo okushisayo kuvame ukwenzeka, njengoba kwenzeka ngoJulayi wangonyaka odlule, kunokuphazamiseka okungaphezu kuka-3ºC kwezinye izingxenye zenhlonhlo, njengeMadrid noma i-Andalusia, kanye nasesiqhingini saseGran Canaria.
Julayi 15 iyaqala isikhathi se-canicular, okuyisikhathi esifudumele kakhulu sonyaka ngokusho kwezibalo. Izophela ngo-Agasti 15, ngakho-ke izinsuku ezingama-30 kuzodingeka uzivikele kahle elangeni nasekushiseni.
Mayelana nemvula, empeleni azikho, ngesilinganiso esingu-20mm. Kodwa-ke, kwesinye isikhathi kuyenzeka, njengoba kwenzeka ngoJulayi 2015, ukuthi kweminye imiphakathi bangajabulela inyanga ehlukile yehlobo, nemvula eningi. Eqinisweni, izivunguvungu zasehlobo zivamile, ikakhulukazi ezindaweni ezisezintabeni.
Athini amazwi kaJulayi?
Kunezisho eziningi ebezishiwo futhi zenziwa zaziwa eminyakeni edlule. Ngenxa yabo singathola umbono ocacile wokuthi inyanga le isibekele ini. Zimi kanje:
NgoJulayi ojwayelekile, njalo entwasahlobo yomile: amanzi ayahwamuka ngokushesha okukhulu, futhi njengoba kungabi nje imvula, imifula ilahlekelwa ukuhamba kwayo.
Ngendlela efisa ukuba ngayo, ngoJulayi ayinalutho kangako imvula: isibhakabhaka cishe ngaso sonke isikhathi sicacile, futhi nomoya ushisa kakhulu.
NgoSantiago ukushisa kuzokuhlula olwandle lomjuluko: umkhosi weSantiago Apóstol ungoJulayi 25, isikhathi lapho kushisa kakhulu.
NgoJulayi i-tabarra enhle, iculo le-cicada: kunezinambuzane eziningi nezinye izilwane okuthi phakathi nobusuku behlobo, futhi ikakhulukazi ngoJulayi, zikhiphe umsindo wazo wesici. Okumelwe kakhulu ngama-cicadas emini, kanye namakhilikithi ebusuku.
Uphi uweta ngoJulayi? Well isuka emseleni iye emthonjeni: engadini yezithelo nasemasimini imvamisa yokunisela kufanele inyuswe. Esikhathini esedlule, nanamuhla, amanzi ayedonswa emthonjeni ukunisela izitshalo nezitshalo, ukunikeza imfuyo amanzi nezindleko zomndeni uqobo.
NgoJulayi phuza futhi ujuluke ... futhi ngeze ukubukeka okusha: ngenxa yamazinga okushisa aphezulu, umzimba womuntu ujuluka ukuze kuthi lapho umoya uvunguza ngisho kancane, kuphole; Kodwa-ke, ukujuluka akwanele ngoJulayi, kepha kuzofanele futhi ukuthi siphuze amanzi amaningi ukugwema ukuphelelwa amandla, futhi sithole nendawo esizopholisa kuyo.
UJulayi usuku lonke: abadala nabancane banempilo eningi: izinsuku zinde, ngakho-ke bobabili abadala nabancane babonwa ngesibindi esikhulu, benesifiso esithe xaxa sokubamba umzuzu.
NgoJulayi nango-Agasti, ngamunye ufana nomunye: lezi izinyanga ezimbili ukuthi isimo sezulu sifana kakhulu. Kokubili lokhu kubonakala ngokubhalisa amazinga okushisa aphakeme kakhulu, futhi akunamvula ezifundeni eziningi zezwe.
UJulayi ushile, ukolweni womile futhi uthambile: Ngenxa yemvula encane, izinkambu zikakolweni zibukeka zomile ngale nyanga.
Isivini, ngoJulayi, asifuni ukuphuza amanzi, kepha sifuna ukushiswa yilanga: kunezitshalo ezithile, njengezivini, okuthi uma imvula inganile ngesikhathi sonyaka, zonakalise.
Uma ufuna amakhabe eSantiago (Julayi 25), tshala eSan Marcos (Ephreli 25): lokhu kuyisikhumbuzo sokuthi kule nyanga ungaqala ukujabulela esinye sezithelo ezijwayelekile zesizini: ikhabe. 🙂
OkweMagdalena, i-hazelnut igcwele: umkhosi weSanta Magdalena ungoJulayi 22, ovame ukuqondana nokuqala kokuvuthwa kwezithelo ze-hazelnut (Hazelnut corylus).
NgoJulayi, amanzi eza nethawula, bese kudlula ihlobo: Futhi ngukuthi, ngalokhu kushisa, akukho okusele ngaphandle kokuzivumelanisa nezimo ngangokunokwenzeka, futhi sizame ukukujabulela ngokugcwele.
Ingabe sikhona esinye isisho osaziyo ngoJulayi?
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Izisho zikaJulayi
Izinto ezi-5 obungazazi ngama-tsunami